व्यक्तित्व/ कृतित्व Archives - Chouthoanga.com
- तेज कुमार राई फोटो खिच्नलाई क्यामेराहरु गुट-गुट बनाएर आउछन्, तिमीलाई फर्काई-फर्काई खिच्छन्, तेर्स्याई-तेर्स्याई खिच्छन्, घरी निन्याउरो बन्न लगाउँछन् र खिच्छन् घरी "हाँसिदेऊ!" भन्छन् र फेरि खिच्छन् । क्यामेराले अह्राएबमोजिम विभिन्न 'भाव'को नक्कल गर्दागर्दै तिमीले तिम्रो 'पुस्तक' ...
‘नेपालमा चाढै नै हाई प्रोफाइल पर्यटक आउने छन्’
काठमाडौं । पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) महामारीका कारण ठप्प प्रायः बनेको नेपाली पर्यटन क्षेत्रमा चाढै ‘हाई प्रोफाइल’ पर्यटक भित्रिने बताउनु भएको छ । उहाँले कतारका राजकुमार पनि नेपालमा आरोहणका लागि आउने निश्चित भएको जानकारी दिनुभयो । ‘कोरोना महामारी सुरु भएप...
यूआइएए म्यानेजमेन्ट कमिटी सदस्यमा कुलबहादुर निर्वाचित
काठमाडौं । नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)का महासविच कुलबहादुर गुरुङ विश्व पर्वतारोहण महासंघ (यूआइएए) म्यानेजमेन्ट कमिटीको सदस्य पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ । शनिबार राती भएको यूआइएएको भर्चुअल साधारणसभामा उहाँ एनएमएको तर्फबाट निर्वाचित हुनुभएको हो । यूआइएए विश्वकै राष्ट्रिय पर्वतारोहण सं...
के होला त कारबाही ? प्रहरी बर्दी र हतियार सहित मा.पा. से गर्दै